VaMpofu Vanoti Kambani ye Essar Ngaibvise Mari Kana Ichida Migodhi
Chikumi 18, 2012
Gurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, vanoti havasi kuzorega kambani yeEssar Africa Holdings ichitora zvicherwa zvenyika mahara pasi pechibvumirano chakaitwa nekambani iyi nebazi rezvemaindasitiri chekumutisiridza kambani yesimbi yeZimbabwe Iron and Steel Company, kana kuti Zisco, iyo yava kunzi New Zimsteel.
Vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemaindasitiri, VaMpofu vati kunyange hazvo dare remakurukota rakati bazi ravo rinofanira kupa kambani yeEssar migodhi yesimbi yeBuchwa, Ripple Creek nemimwe kuitira kuti kambani iyi itange kuita basa, havasi kuzoita izvi kana kambani iyi isina kutenga migodhi iyi.
VaMpofu vati Zimbabwe haigoni kupa matani anodarika mabhiriyoni makumi matatu esimbi kuEssar pasina chayabvisa vachiti zviwanikwa zveZimbabwe zvinofanira kubatsira zvizvarwa zvenyika ino.
Vati Essar inofanira kutaurirana nebazi ravo panyaya yemigodhi iyi. Vatiwo kubvira pakaitwa chisungo chedare remakurukota masvondo matatu apfuura, havasati vanzwa kubva kukambani iyi.
Vatiwo kambani yeEssar inofanira kutaurirana zvakare nebazi ravo pamusoro pesimbi dziri kumugodhi weMwanesi kuChivhu.
VaMpofu vatiwo bazi ravo harina ruzivo rwakanyanya pachibvumirano chehurumende neEssar uye rinofungira kuti chibvumirano ichi hachinei nekumutsiridza Zisco asi kuti kambani iyi yave kutoda zvicherwa zvakawanda.
Vatiwo havazivi kuti sei bazi rezvemaindasitiri rakaita chibvumirano neEssar risina kutaurirana nemamwe mapazi ane chekuita nechibvumirano ichi. Vati chibvumirano ichi hachina kumbogara chazeyiwa mudare remakurukota uye chakatozotaurwa nezvacho apo zvinhu zvaive zvave kutadza kufamba.
VaMpofu vatiwo havana hurongwa hwekuti Essar ichada kushanda sei vakati zvinoita sekunge pane zvinhu zvakawanda zvairi kuda kuita zvisiri pachibvumirano chayakaita nehurumende.
Kambani yeEssar Africa Holdings yakaita chibvumirano chekuti imutsiridze Zisco nemari inodarika mazana manonwe nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora asi bazi rezvemigodhi rinoti mari iyi ishoma zvikuru kana pakatariswa simbi dzichatorwa nekambani iyi.
VaMpfofu vatiwo bazi ravo riri kusandura mitemo yezvicherwa kuitira kuti makambani ekunze asauye kuzotora hupfumi hwenyika ino asi iwo achiunza mari shoma.